“ भन्छन पाप धुरिबाट कराउछ ’’ | नेपाल इटाली डट कम
“ भन्छन पाप धुरिबाट कराउछ ’’
August 22, 2009 — nepalitaly
यथेष्ट पिल्सिएको आत्माको सुगन्दित र आकर्शक सपनाबाट असिम माया ! !
आज मलाई यति असजिलो भइरहेको छ, सायद यत्तिको अफ्ठ्यारो त सर्वप्रथम सगरमाथा चढ्नलाई तेन्जिङ र एड्मण्डलाई पनि भएको थिएन होला । उनीहरुलाई त थाहा थियो सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्नलाई सबैभन्दा पहिलो पाइला सगरमाथाको फेदिमा नै राख्नु पर्छ भनेर । तर मलाई आज यो पत्र कसरी शुरु र अन्त्य गर्ने भन्ने अस्पष्ट भएकोले होला यति अफ्ठ्यारो लागिरहेको छ । आज तिमी प्यारी कल्पना, प्राण प्यारी कल्पना, अर्धाङ्गिनी कल्पना जस्ता सबै आफनत्वको शव्दहरुबाट पर तिमी संवोधान विहिन भएकी छौ ।
जिन्दगी दुई दिनकै भए पनि अनेकौं समस्याहरुसँग लड्दै मुकाविला गर्दै जीउनु पर्दो रहेछ । थुप्रै थुप्रै दुख: सुखका अनुभवहरु संगाल्नु पर्दोरहेछ । सायद त्यसैले भन्ने गर्छन् – जीन्दगी अनुभव हो , भोगाइहरुको सम्पूर्णता हो ……।
तर विछोडको पिडाहरु भने जीवनको अनौठो व्यथा भएर सधै वल्झिदिंदो रहेछ । हरपल चिमट्दो रहेछ, रातदिन आँशुको सागरमा डुव्दै वेदनाको ज्वालामा जल्नु पर्दो रहेछ । अनि मिठो मिठो कल्पनामा हराउदै सपना भित्रको विपनामा आफ्नो भविष्यलाई चियाउनु पर्दो रहेछ । म अलिकति साहस वटुलेर तिनै भोगाइहरुलाई गम्भिर भएर सोंच्छु……… ? जताततै अन्धकार नै अन्धकारले छाउन थाल्छ । आफू बाँचिरहन पनि घृणा लाग्छ । यस्तो लाग्छ यो मतलवी संसारबाट सधै सधैको लागि विदा लिऊ , तर मर्न झनै ठूलो साहस चाहिंदो रहेछ । सायद आफूमात्र भएको भए …. ! आजपनि मेरो मनमा ताजै छ, म सानै छदा ममीले भन्नुभएको कुरा, उहाँले भन्नु भएको थियो “ छोरा भनेको आशाको लौरी हो, जो अभावको दुवाली छेक्न सकिने दुख:को उकालोमा टेक्न सकिने ” निश्चय नै मेरो वुढा आमा, वावाहरुले आशाका पहाडहरु विश्वासका हिमालहरु चुलाएर प्रतिक्षा गरिरहनुभएको छ ।तर म असफल असमर्थ र लाचार जिबन बिताउन बिबस छु। परदेसिनुको पिडा, परदेशको वास्तविक पिडा र मनको पिडाको पहाडलाई कुचल्नको लागि मैले अनेक उपाय गरे। आफुलाई बिर्सनको निम्ती ति पिडाहरु बिर्सनको निम्ती मैले ईन्टरनेटको साहारा लिए। शुरु शुरुमा आफुलाई हराउन सफल पनि भए तर आज मैले ईन्टरनेट कै कारण जिउदो लास सरह भएको छु। ईन्टरनेट जिबनलाई मैले वास्तविक जिबन बनाए तर ईन्टरनेट जिबनमा म मरिसकेको छु भने वास्तविक जिबनमा जिउदो लास। यसमा तिम्रो केही दोश छैन। दोश मेरै हो।भन्छन पाप धुरीबाट कराउछ। मैले गरेको पापको फल पाउन आज म तयार छु…
साथीभाइहरु मलाई देखेर मेरो हालत देखेर किन हासे आज बुझेको छु। कल्पनाको संसारबाट अली बाहिर निस्केर आखा घुमाउने हो भने नरमाइलो वास्तविकता लाई नै हेर्नु पर्ने रहेछ। कल्पनाको संसार मनको आँखाले हर्ने भएकोले होला स्वर्ग झै सुन्दर रमाइलो,,,, कैले काही लाग्छ यो वास्तविकतालाई हेर्ने आँखा किन बनयो भगवानले।
यधपी तिमी मेरो कल्पना हौ। तिमी मेरो संसार हौ। तिमी जहाँ छौ जस्तो छौ मेरो कल्पना भएर बसिरहेको छौ। म तिमीलाई कल्पना नै बनाउन चाहन्छु सके सम्म यो वास्तविक जिबनमा तिमीलाई ल्याउने छैन। वास्तविक जिबनमा पिडा छट्पटी मात्र छ त्यसैले कल्पना तिमी मात्र कल्पना बनी देउ। तिम्रो मनको आँखा खोलेर हेर तिमीले मलाई पाउने छौ। म छु यही छु यही कतै छु……..
##कल्पना एउटा imagination हो मेरो मन मा छ कल्पना मेरो वास्तविक जिबनमा छैन। खाली कल्पना अनी kalpana मेरो कल्पना…
Posted in आफ्नै कुराहरु...2Comments »
2 Responses to ““ भन्छन पाप धुरिबाट कराउछ ’’”
December 24, 2010 at 06:06
i like so much in this latter k yo real ghatna ho yadi ho bhane dhery dukhako ra ho
December 24, 2010 at 13:47
ya this isareal incidence and its my own..
« नेपालमा भारतीय तथा अरु खुफियाको छायाँ युद्ध
तीज पर्व र नेपाली नारीको यथार्थता »